Ogaden News Agency (ONA) – Faah Faahinta Doorashadii Gudiga Maamulka Ururka Haweenka Ogadenya (UHO).
Faah Faahinta Doorashadii Gudiga Maamulka Ururka Haweenka Ogadenya (UHO).
Posted by ONA Admin	/ December 28, 2014
Waxaa maanta ooy taariikhdu tahay 28/12/2014 lagu qabtay magaalada Copenhagen ee caasimada wadanka Denmark doorashadii Ururka Midawga Haweenka Somalida Ogadenya. Doorashada Gudiga Maamulka UHO ayaa maanta udhacday si heersare ah taasoo tartan aad uxiisa badan loogalay. Gudiga ladoortay oo dhamaantood ah kuwo lagu soo xushay aqoon, karti, dadaal iyo wadaniyad dheeraad ah ayaa laga sugayaa ineey xilkaas iyo masuuliyada baaxadaas leh ee loo egmadan ay sidii loogu talogalay ooga soobixi doonaan.
Ergooyinkii iyo wufuudii kaqayb qaadatay guud ahaan shirwaynaha Haweenka Ogadenya gaar ahaan doorashada Gudiga Maamulka ee loodoortay ayaa si’aan hagar la,aan ah ooga qaybqaatay hirgalinta ajendeyaashii shirwaynahan taariikhiga ah loosoo agaasimay taasoo ahayd in laga dhiso Uruwaynaha Haweenka Ogadenya (UHO).
Xoghayaha cusub ee loodoortay Abwaanada Qaaliga ah ee dhamaan umada Soomaaliyeed ay suugaan halgameedkeeda aadka ujecel yihiin waa Halganto: Rooda Cabdi Ibrahim Gureey (Roodo Af-Jano) ayaa khudbad kooban kasoo jeedisay madasha shirwaynaha. Abwaanad Rooda Af-Jano ayaa sidii looga bartay waxay kaqaybgaleyaashii shirwaynahan katirisay tix gabay ah oo dareenka iyo damiirka shacabwaynihii madasha joogay dhaqaajisay taasoo ay labeegsatay munaasabada shirkan taariikhiga ah.
Abwaanad Rooda Af-Jano, Xoghayaha cusub ee UHO ayaa sidiiran ooga mahadcelisay Ergooyinkii iyo wufuudii kaqaybgalay shirwaynahan iyo kuwii sida kalsoonida iyo wadaniyada leh codkooda qaaliga ah kusoo doortay Abwaanada umada Somalida Ogadenya.